Taariikh Nololeedki Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi – The official Somali Historical
Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi), waxa uu ku dhashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer . hadraawi waa abwaan aad u caana oo soomaali oo dhami ay si fiican u taqaano . hadraawi suugaanta somalida e casrigan waxa uu ku leeyahay dawr aad u wayn.waxa uu yahay .abwaankii uguwayna .abwaanada somalida inta somalida suuganteeda laqoray.hatraawi.waxa uu wax barashadiisuu ku qaatay wadanka Yemangaar ahaan magaalada Cadan
Taariikhdii maxamed ibraahim warsame wxaa qoray maxamed axmed maxamuud tuuryare Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi) wuxu ku dhashay miyiga magaalada Burco ee gobolka Togdheer ee wadanka somaliland, taariikhdu markay ahayd 1943. Halkaas oo uu ababay sanadihii hore ee caruurnimadiisii, isla sanadahaas oo ay xijaabtey hooyadiis Kaaha Jaamac dhuux, ka dibna adeerkii Axmed Warsame Siciid(Niibsan) oo degenaa magaalada Cadan ee dalka Yemen ayaa loo geeyey isagoo mudadaasi 9 jir ahaa, halkaas ayaa aayooyinkiis Caasha Maxamed Xasan iyo Shamis Xasan Nuur Qaaje ay ku gacan qabteen oo ku hanteen una galeen halkii hooyadiis.
Hadraawi waxbarashadiisi aasaasiga ahayd illaa dugsiga sare wuxuu ku qaatay Dugsigii Cadmeed ee wakhtigaa la odhan jirey (St. Anthony’s High School.) mudadii u dhexaysey1956-1964.
Markii uu dhameeyey dugsigaa ayuu xamarkaga shaqeeyey macallinimo, mudo laba sanadood an. 1967 ayuu Cadan ka soo guurey una soo kicitimey xagga Somalia. Waxa uu cagaha soo dhigay magaalada Muqdisho, halkaas ayuu ka billaabey shaqadii ugu horeysey, wuxuuna boos ka qabtey Wasaarada Warfaafinta sanadku markuu ahaa 1969kii, kumase raagin. 1971-kii ayuu shaqadiisi ugu horeysay ee rasmiga ahayd ka billaabay Wasaarada Waxbarashada, isagoo macallin ka noqday Dugsiga Hoose/Dhexe/Sare oo ku dhex yaaley Dugsiga Hoyga Nolosha ee Lafoole(Afgooye), isla wakhtigaas oo uu ku qaadanayey daraasada tababarka macallinimada machadkakii Macallinimada ee Lafoole(N.T.E.C).
Kartidiisa Hal-abuurnimo markii ugu horeysey ee uu soo shaac baxo, waxay ahayd intii aanu Cadan ka soo tegin. 1966-kii ayuu curiyey soona ban-dhigay Riwaayadii la magac baxday “Hadimo” hase yeeshee wuxuu si fiican ugu doob dillaacsaday, maansadiisuna caan baxday intii uu u soo wareegey Soomaaliya. Gaar ahaana intii ku sinayd 1970-nadii. Wakhtigaas oo ay soo shaac baxeen heesaha tirada badan ee aadna looga helay soona jiitey dhegaha dadka Somaliyeed, kiciyeyna dareenka dadka. Wuxu noqday nin suugaantiisu si gaar ah u taabato dadka dhegahooda, muranna ka dhex dhalisa dadka dhexdooda si gooniyana oo dhadhansado, had iyo jeerna laga soo daayo Idaacadaha heesihiisa iyo maansooyinkiisa ayna ka heleen bahda warfaafintu.
Waxa la soo qaadan karaa Riwaayadii “Aqoon iyo Afgarad” oo ay u jireen saaxiibadiis Maxamed Xaashi Dhamac(Gaariye), Siciid Saalax Axmed, Muuse Cabdi Cilmi iyo Silsiladii maansadii “Siinley” iyo Riwaayadii “Tawaawac” ee ay ku jireen heesaha ay ka midka ahaayeen “Hal La Qalay iyo Ceel Walwaaleed”.
Suugaantiisa waxay noqotay tu si gaar ahaaneed ugu nixisa oo ku abuurta werwer xukuumadii kacaankii barakaysnaa ee Siyaad Barre, sidaas darteed ayaa ha’adaha cadaadiska iyo cabbudhinta uu u daba dhigay oo ay had iyo jeer daba taagnaayeen, Ka dib maansadii “Siinley” iyo Riwaayadii “Tawaawac” iyo sababa kale oo maansooyinkiisa la xidhiidha ayaa 11.Novenber.1973-gii loo taxaabay xabsiga, waxaa la geeyey Qansax Dheere (Gobolka Bay) halkaas oo ku xidhnaa illaa iyo 09.April.1978-kii.
1dii May 1982-kii ayuu tegey goobaha uu ka socdey halganka Mucaaradka Soomaliyeed ee ururkii Dhaqdhaqaaqa Waddaniga Soomaaliyeed ee la odhan jirey SNM .oo loo soo gaabiyey (Somali National Movement). Wuxu halkaas ka galay halgan siyaasadeed, suugaaneed, wadaniyeed iyo mid xoriyadeedba. Allena wuu ku guuleeyey kaas, haddana wuxu ku jiraa halgan kale oo nabad, caddaalad iyo midnimo doon ah.
Gudgude waa mid ka mida gabayada Abwaan hadraawi tiriyey,akhriste dhuux micnaha uu gabaygu ku qotomo.
Gedgedoonka maankiyo qalbiga, gocasho soo boodka,
Xaajada garlayliga jartiyo, Gun u saluugayga
Gibladiyo mashxaraddayda iyo, farax la goohayga
Gandoodkayga taahayga iyo, goobo xaradhkayga
Gurmadkiyo haloosiga taxmiyo, guluf alooskayga
Gama’li’ida reenkayga iyo, jiif galgaladkayga
Goobyaalka caga-jiidka iyo, Meel-ka-gabargaalka
Gucla orodka seeraarka iyo, geyllan dirirkayga
Haddaan geestan eegana cabsida, gaarkay igu raaran
Gabranaanta qoollaalligiyo, mala gorfayntayda
Gadoobnaanta yeelkayga iyo, kala gantoobnaanta
Garab lida soodhkayga iyo, gooninnimadayda
Goofkiyo xabaalaha shixnadan, godadka buuxbuuxa
Cagta go’an lugaa iyo gacmaha, gabawar duugoobey
Naafada garbaha kaashatee, sumucu gaagaabshey
Geerida shinkeed dhaaftay iyo, Guri dambayskayga
Goodaadsigaygiyo hiyiga, garar tallawgiisa
Kol haddaan wadnuhu kuu garrayn, geydha kugu yeedhye
Garasow anaa kula hadlee, gacalkayow heedhe
Nafta gororaheediyo haddii, galowda lays taabto
Geesteyda waafule ninkii, goob ka saahidaye
Ummad geeska loo tumay habeen, gocasho soo jeeddo
Haddii aan tashiga loo golayn, amase gaashaanka
Fallaadhiyo gabooyaha haddaan, godobta loo taaban
Iyadoo gadoodiya hadday, fadal garmaammayso
Hadba nabar gataatiya hadday, gebi dhac tuuryayso
Galladdeeda oo dhow hadday, gaadhi kari weydo
Inta gudashadeed tahay hadday, geysan kari weydo
Iyadoon garaysnayn haddii, gacantu ay daasho,
Gamaarshaa ku dhaca amase way, gabax tidhaahdaaye
Gabbashay liqdaa amase way, gamashi luuddaaye
Way kala guddaa amase way, kala go’doontaaye
Ways gawdhisaa amase way, feedha gurantaaye
Guushay nacdaa amase way, gubasho oydaaye.
Inkastoo guddoonkii burburay, loo gudcura joogey
Inkastoo go’aankii dulliga, geesinnimo diiddey.
Hussein Osman ( Khuburo )
Previous: Taariikh nololeedkii S/Guuto Ismaaciil Cali Obokor
Next: Fanaanka Jooqle Oo Ka Badbaaday Isku day Dil‏